Nhau - Chii chinonzi IP Proof level? Zvinorevei pakuratidzwa kuratidzwa?
Ose anotungamira ekuratidzira vanhu vanoziva kuti yekunze inotungamirwa kuratidza inofanirwa kuve iine yakanaka IP chiratidzo cheyero kuve nechokwadi chehunhu hwakanaka.
R&D mainjiniya eYONWAYTECH LED kuratidza ikozvino ingo tarisa kunze ruzivo rwe LED kuratidza isina mvura kwauri.
Kazhinji, danho rekudzivirira re LED kuratidza skrini iIP XY.
Semuenzaniso, IP65, X inoratidza padanho reguruva-humbowo uye yekune dzimwe nyika yekudzivirira kudzivirira kweiyo LED kuratidza skrini.
Y inoratidza chiyero chekuisa chisimbiso chinyoro-chiratidzo uye mvura-chiratidzo chekupinda kweiyo LED kuratidza skrini.
Iyo yakakura nhamba iri, iyo yepamusoro dziviriro danho iri.
Ngatitaurei nezve kukosha kweiyo X uye Y manhamba zvichiteerana.
X zvinoreva kodhi yenhamba:
0: Haidzivirirwe. Hapana dziviriro kubva pakubata uye kupinda kwezvinhu.
1:> 50mm. Chero hombe nzvimbo yemuviri, senge kuseri kweruoko, asi hapana dziviriro pakusangana nemaune nenhengo yemuviri.
2:> 12.5mm. Minwe kana zvimwe zvinhu zvakafanana.
3.> 2.5mm. Zvishandiso, waya dzakakora, nezvimwe.
4.> 1mm Yakawanda waya, screws, nezvimwe.
5. Guruva Rakadzivirirwa. Ingress yeguruva haina kudzivirirwa zvachose, asi haifanire kupinda muhuwandu hwakaringana kuti ikanganise kushanda kunogutsa kwemidziyo; dziviriro yakakwana pakusangana.
6.Dust Tight.No ingress yeguruva; dziviriro yakakwana pakusangana.
Y zvinoreva kodhi yenhamba:
1. Kudonhedza mvura. Kudonha mvura (madonhwe akatwasuka achidonha) hakuzovi nemhedzisiro inokuvadza.
2. Kudonhedza mvura kana yarereka kusvika pa15 °. Mvura inodonha chaiyo haingavi nemhedzisiro inokuvadza kana yakavharirwa yakatenderedzwa pakona kusvika pa15 ° kubva panzvimbo yayo.
3. Kumwaya mvura. Mvura inodonha sechimvura pane chero kona kusvika pamakumi matanhatu ° kubva pakamira haizokuvadza.
4. Mvura inopararira. Mvura inosvetukira pakakomberedzwa kubva kune chero nzira haizove nekukuvadza.
5. Jeti dzemvura. Mvura inoratidzirwa nekamwene (6.3mm) pakakomberedzwa kubva kune chero nzira haizove nemhedzisiro inokuvadza.
6. Mvura ine simba jets. Mvura inofungidzirwa mune jets dzine simba (12.5mm kamwene) pakatarisana nekakomberedzwa kubva chero nzira hakuzove nemhedzisiro.
7. Kunyudza kusvika 1m. Ingress yemvura muhuwandu hunokuvadza haigoneke kana yakavharirwa yakanyudzwa mumvura pasi pemamiriro akatsanangurwa ekumanikidza uye nguva (inosvika 1 m yekunyudza).
8. Kunyudza kupfuura 1m. Midziyo iyi inokodzera kuramba uchinyudzwa mumvura pasi pemamiriro izvo zvinotsanangurwa nemugadziri. Kazhinji, izvi zvinoreva kuti michina yakasimbiswa. Nekudaro, nemamwe marudzi emidziyo, zvinogona kureva kuti mvura inogona kupinda asi chete nenzira yekuti isaburitse zvinokuvadza.
Tinogona kuona kuti yemukati uye yekunze mvura-chiratidzo kupatsanura kwema LED kuratidza kwakasiyana.
Iyo isina mvura nhanho yekunze inowanzo kwira kupfuura iyo yemukati.
Nekuti kune akawanda ekunze ekuratidzira ma LED pamazuva ekunaya kana mukuda kwekudzivirira mvura pane emukati ma LED kuratidza.
Semuenzaniso, zvinogona kuve nyore kwauri kuti unzwisise iyo isina mvura parameter yeiyo LED yekuratidzira skrini.
Chikamu chekudzivirira chechiratidziro IP54, IP ndiyo tsamba yekumaka; iyo nhamba 5 ndiyo yekutanga mamaki nhamba, uye iyo nhamba 4 ndiyo yechipiri yekumaka nhamba.
Iyo yekutanga digit inoratidza padanho redziviriro iyo yakavharirwa inopa pamusoro pekusvikira kune zvine ngozi zvikamu (semuenzaniso, magetsi makondakita, zvinofamba zvikamu) uye ingress yezvinhu zvakasimba zvekunze zvinhu. Iyo yechipiri manhamba inoratidza iyo isina mvura yekudzivirira chikamu.
Iyo isina mvura nhanho yekunze LED yakazara-ruvara kuratidza skrini ndeye IP65.
6 ndeyekudzivirira zvinhu uye guruva kupinda muchikona.
5 ndeyekudzivirira mvura kupinda muchiratidziri kana uchimwaya.
Ehezve, hapana dambudziko mukutungamira kwekuratidzwa nedutu remvura.
YONWAYTECH yakaedza ese edu ekunze akatungamira kuratidza pamberi pekusununguka, iyo IP yekudzivirira mwero wekunze LED kuratidza kabhodhi inofanirwa kusvika IP65 kuti iwane iyo chaiyo pfungwa yekudzivirira mvura uye yakavimbika mashandiro.